2012 देखि अमेरिकी automaker युरोपेली विभाजन "फोर्ड" अगाडि-पाङ्ग्रा ड्राइव मध्य-आकार वैन, फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन रूपमा ज्ञात उत्पादन गर्न थाले। जो चाँडै लोकप्रियता प्राप्त र यो दिन लोकप्रिय हुन जारी छ। तर, विशेष ध्यान योग्य यो गाडी को लाभ।
तपाईं अनुमान सक्छ रूपमा, नाम आधारित यो कार "फोर्ड ट्रान्जिट" को रूपमा जानिन्छ मोडेल को लाइन बाट छुट्टयाएर छ। 2012 मा नयाँ चौथो पुस्ता एक सुधार र थप आधुनिक वैकल्पिक रूपमा जारी गरिएको थियो।
महत्वपूर्ण कुरा, एक व्यावसायिक वैन फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन र यात्री रूपमा उपलब्ध छैन। मात्र संस्करण, सहज आन्दोलन, एक अतिरिक्त Tourneo नाम अन्तर्गत ज्ञात लागि डिजाइन।
युरोपेली विभाजन को प्रतिनिधिहरु, यो मोडेल जो वोक्सवैगन ट्रान्स्पोर्टर र मर्सिडीज वीतो जस्ता कार समावेश यो खण्ड को सफल प्रतिनिधिहरु, संग प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माता इच्छा फलस्वरूप देखा को विचार उत्पादन सुरु गर्न भनेर उल्लेख गरे।
र, यो टिप्पण लायक छ, उत्पादकहरु यो लक्ष्य हासिल गर्न व्यवस्थित। 2012 मा, मोडेल प्रकाशित भएको थियो, र त्यसै वर्ष मा युरोप मा साल को भ्यान बुझे। र अझै फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन गर्न यूरो NCAP 5-स्टार सुरक्षा दर्जा अनुमानित थियो जो पहिलो आत्म-रंग वैन छ।
यो गाडी एक ठूलो कार्गो कक्ष छ। फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन ठाडो र तेर्सो स्थिति दुवै, धेरै Pallets समायोजित गर्न सक्छन्। आफ्नो आयाम, अन्य कुराहरु, 800h1200h145 मिमी बनाउन।
तर ठूलो भार मा माल गाडी समस्या छैन। लगभग5मीटर को परिवहन लम्बाइ र उचाइ - दुई भन्दा बढी। दर्पण बिना चौडाई 1986 मिमी पुग्छ। साथै, यी मोडेल को स्लाइड पक्ष ढोका 1030 मिमी मा खोल्नुहोस्। तसर्थ, ठूलो वस्तुहरूको लोड कुनै पनि असुविधाको कारण छैन। अन्तर ट्रक को पछिल्लो ढोका 1400 मिमी पुग्छ।
2555 मिमी अधिकतम लोड लम्बाइ। तर यो वृद्धि गर्न सकिन्छ कारण विभाजन प्रालंब (530 मिमी) मा उपस्थितिको।6वर्ग को कार्गो क्षेत्र को कुल मात्रा। एम। उच्च मा कुराको 2.7 टन ओसारपसार गर्न डिजाइन एक वैन। यस मामला मा, यो towed छ। तर यो 2700 किलो को अधिकतम नाघ्न हुँदैन।
वैन फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन / Tourneo नयाँ संस्करण मोडेल को उपयोगिता र कार्यक्षमता स्तरवृद्धि गर्ने प्राविधिक विशेषताहरू धेरै छन्।
पछाडिको दृश्य क्यामेरा, उदाहरणका लागि, स्वतः बित्तिकै ड्राइभर उल्टो गियर चयन रूपमा सक्रिय। र तपाईं छत मा भारी सामान राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यातायात समयमा यसको निष्ठा बारेमा, विकासकर्तालाई, छत crossmember कार्गो तह एकीकृत हुनाले एक विश्वसनीय र सहज फिट प्रदान चिन्ता गर्न सक्दैन।
थप, हामी छ के फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन «सहायक» बारेमा कुरा भने, यो parktronics उल्लेख गर्नुपर्छ। तिनीहरूले यो वैन फिर्ता र अगाडि दुवै हो छ। चेतावनी तीव्रता बढ beeps दूरी कम गर्दा - तिनीहरूले निर्धक्क भई र चाँडै पार्क ठूलो मद्दत छन्।
आफूलाई भ्यान भित्र फेला, मान्छे एकछिन भ्रम मा गिरावट। शैली भित्री यात्री कार भित्री व्यापार व्यक्तित्व, एक सामान वाहन सम्झना दिलाउँछ।
भित्र, सबै कुरा अधिकतम Ergonomics सजाया छ। को स्टेरिड़ मा अवस्थित छ नियन्त्रण बटनहरू अडियो सिस्टम। विस्तृत चालक सीट समायोजना, गरम छ र एक आरामदायक armrest छ। एउटै पनि यात्री सीट लागू हुन्छ। "ब्लुटुथ", USB कनेक्टर र औक्स संग, AM / एफएम - अडियो सिस्टम पनि सजिलो छ। को स्टीयरिंग स्तम्भ उचाइ र पहुंच लागि समायोजित गर्न सकिन्छ। दर्पण ताप र electroresettings संग सुसज्जित छन्।
विशेष ध्यान फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन जस्तै यो कार मा सुरक्षा को स्तर, याद गर्न चाहन्छु। यी वैन मा मान्छे बायाँ टिप्पणी, अक्सर यो महत्त्वपूर्ण विषय असर गर्छ।
यी वाहन संग शक्तिशाली सुरक्षा प्रणाली सुसज्जित छन्। शरीर उदाहरणका उच्च तन्यता इस्पात यसको संरचना मा बोरोनकोअर्थ समावेश बनेको छ। उकालो सुरु गर्दा TSC, ESP, ABS, र सिस्टम हात फ्री त्यहाँ यात्री airbag र चालक सहायताको प्रणाली हो।
एक भ्यान को हुड आधुनिक आर्थिक डिजेल इन्जिन जसको मात्रा 2.2 एल छ, सेट गरिएको छ। यो एक 6-चरण "संयन्त्र" संग अग्रानुक्रम मा काम गर्छ। त्यहाँ दुई विकल्प छन् - एक उत्पादन 125 HP। को, र अन्य -। 100 एल। एक।
विशेष ध्यान फोर्ड ट्रान्जिट अनुकूलन वैन चेसिस हुनुपर्छ। घटक को विनिर्देशों वाहन अधिकतम स्थिरता प्रदान गर्नुहोस्। हुनत, यो एक महत्वपूर्ण भूमिका र बलियो शरीर संरचना खेल्छ।
यो पनि यस भ्यान विकास समयमा कुनामा मा कर्षण नियन्त्रण प्रविधि प्रयोग भएको थियो कि ध्यान ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ। उनको शक्तिमा धन्यवाद ब्रेकिंग फोर्स रूपमा, गतिशील रूप पुनः वितरण गरिएको छ।
खैर, भ्यान को ब्याट्री बौद्धिक regenerative चार्ज प्रणाली संग सुसज्जित छ। यसलाई कारण, उहाँले मात्र ती क्षणमा जब तपाईं यो आवश्यकता मा ऊर्जा भरिएको छ। तर ग्याँस पेडल थिचिएको बेला। यो विशिष्टता मार्फत, इन्धन बचत र वातावरण पदार्थ कं2मा उत्सर्जित को स्तर कम।
र पनि ड्यासबोर्डमा त्यहाँ अर्को गियर स्विच गर्न आवश्यक छ के बिन्दुमा ड्राइभर भन्छ, एक विशेष सूचक हो। यो एउटा सरल तर धेरै प्रभावकारी इन्धन बचत गर्न विधि हो।
टिप्पणीहरू मोटर चालकहरुलाई
यो मोडेल वैन स्वामित्व गर्ने मान्छे, मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्। पहिलो कुरा तिनीहरूले खपत भन्छन्। बाट प्रति 100 किलोमिटर 5.56लिटर! उत्कृष्ट। यो यस्तो ट्रान्जिट डाटा मार्फत छ सफलतापूर्वक VW ट्रान्स्पोर्टर, माथि 7.3 लिटर गर्न प्रवाह दर संग प्रतिस्पर्धा छ।
उज्ज्वल प्रकाश कार्गो खण्ड एलईडी ओप्टिक्स जस्तै अझै धेरै मान्छे। यो तथापि, छ एउटा विकल्पको रूपमा उपलब्ध छैन। तर मालिकहरूको पहिले नै "फोर्ड" खरिद, यो आदेश सल्लाह छ - धेरै व्यावहारिक र उपयोगी साथै।
उदाहरणका लागि, एक ल्यापटप - पनि धेरै एक यात्री को अवस्थित अन्तर्गत सीट कक्ष, जो केही सानो पकड गर्न सक्छन् जस्तै। वा उपकरण को एक सेट।
तर कस्टम / Tourneo लोकप्रिय भयो कि मुख्य कारण, इन्जिन छ। Powertrains, साथै प्रसारण केही तत्व, विकासकर्तालाई अघिल्लो पुस्ता ट्रक मोडेल पहिले नै आफूलाई सिद्ध गरेको देखि लियो।
"वोल्वो-340" (डिजेल) विनिर्देशों र समीक्षा
को लाम्ब्डा जांच कसरी जाँच गर्ने जानकारी को लागि
टायर Amtel NordMaster: समीक्षा। Amtel NordMaster: मूल्य, सुविधाहरू
ब्रेक लगान समयमा कम्पन को गति मा। ब्रेकिंग समयमा ब्रेक पेडल को कम्पन
Adsorber - यो के हो? किन adsorber लागि आवश्यकता? Adsorber - दोष
अभिनेता Ulyanov Mihail: जीवनी, Filmography, परिवार
Gelendzhik, बाक्लो केप। Gelendzhik, छुट्टी, केप बाक्लो
नयाँ वर्षको लागि तयार - आफ्नो हातमा क्रिसमस पुष्पांजलि बनाउन
लामो-दूरी सम्बन्ध। सम्बन्ध को सफलता को रहस्य अलग
अभिव्यक्ति: कसरी interlocutor को विचार निर्धारण?
ब्रान्डी "Torres" ढिला: समीक्षा
महिला मा मूत्राशय को सुनिंनु: उपचार, कारण, लक्षण
स्विडिश रसायनविद् नोबेल अल्फ्रेड: जीवनी डाइनामाइटले को आविष्कार, नोबेल पुरस्कार को संस्थापक
परेलाहरु काजल कसरी रंग र कसरी यसको कार्य बलियो बनाउन?
संगठन को अवधारणा र व्यवस्थापनमा यसको भूमिका
सामाजिक सर्कल के हो? कसरी सिर्जना र सामाजिक सर्कल विस्तार गर्न
इरेन Vartika: जूता को डिजाइन मा एक नया दृष्टिकोण